Mbibi nke oyi akwa ozone: ihe kpatara ya, nsonaazụ ya na otu esi elekọta ya | Network Meteorology
Ozone oyi akwa mbibi
Otu n'ime ikuku nke ikuku anyị nwere bụ nke na-echebe anyị pụọ na radieshon nke ikuku na-emerụ ahụ nke anwụ. Ọ bụ ihe gbasara ozone oyi akwa. Ozone oyi akwa bụ nke a hụrụ na stratosphere ma mejupụtara tumadi ozone. Nsogbu ya bụ na ọ na-akpata a mbibi ozone n'ihi ọrụ mmepụta ihe nke mmadụ. Ekele maka nkwekọrịta dị iche iche oghere nke e kere na oyi akwa a na-ebelata. Otú ọ dị, a ka nwere ọtụtụ ọrụ ime.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị etu mbibi ozone oyi ji emetụta ụwa anyị yana ihe ị ga-eme iji lekọta ya.
1 Ozone oyi akwa mbibi
2 Mkpa nke izere mbibi nke oyi akwa ozone
3 Otu esi elekọta ya
Ọ bụ akwa nchekwa dị na stratosphere. Ọ na - eme dịka nzacha maka radieshon nke ultraviolet nke na - emerụ ndị dị ndụ ahụ. Ọ bụ ezie na oyi akwa a dị ezigbo mkpa maka nlanarị, anyị bụ ụmụ mmadụ ka dị ka mkpebi siri ike ibibi ya. Chlorofluorocarbons bụ kemịkalụ nke na-ebibi ozone na stratosphere site na mmeghachi omume dịgasị iche. Ọ bụ gas nwere fluorine, chlorine, na carbon. Mgbe mmiri ọgwụ a rutere na stratosphere, ọ na-enweta mmeghachi omume nke fotolysis na ultraviolet radieshon nke anyanwụ. Nke a na - eme ka ụmụ irighiri ihe ndị ahụ kwadoo ma chọọ nnụnnụ chlorine. Chlorine na-emeghachi omume na ozone na stratosphere, na-eme ka atọm oxygen meju ma na-agbaji ozone.
Ozone dị na stratosphere ma di elu n’agbata kilomita iri na ise na iri ato. Ihe mejupụtara oyi a bụ mkpụrụ ndụ nke ozone, nke mejupụtara ya atọm atọ atọ. Ọrụ nke oyi akwa a bụ ịmịkọrọ radiesị ultraviolet B ma rụọ ọrụ dị ka nyo iji belata mmebi.
Mbibi nke oyi akwa ozone na-eme mgbe mmeghachi omume nke mmiri ọgwụ na-akpata mbibi nke ozone stratospheric. A na-ehichapụ radieshon nke ikuku site na oyi akwa ozone, ebe a na-abanye mkpụrụ ndụ ozone site na ultraviolet B. Mgbe nke a mere, mkpụrụ ndụ ozone na-agbaba n'ime oxygen na nitrogen dioxide. A na-akpọ usoro a fotolysis. Ọ pụtara na ụmụ irighiri ihe ndị ahụ na-agbari n'okpuru ọrụ nke ìhè.
Isi ihe kpatara nbibi ozone nke ozone bụ nsị nke chlorofluorocarbons. Ọ bụ ezie na anyị kwurula na mbido anyanwụ na-ebibi ozone, ọ na-eme ya n'ụzọ ziri ezi na nnọpụiche. Nke ahụ bụ, ole ozone nke decomis nke fotolysis ruru ma ọ bụ obere karịa ozone nke enwere ike ịmalite site na mkpakọrịta intermolecular.
Mkpa nke izere mbibi nke oyi akwa ozone
Ogbe ozone na-agbatị gburugburu ụwa dum. Ọ bụghị otu ọkpụrụkpụ n'akụkụ niile nke ụwa, mana njupụta ya na-agbanwe agbanwe. Ono ozone mejuputara ato ato oxygen na acho ya site na ikuku gas ma na stratosphere ma n’elu. Ọ bụrụ na anyị achọpụta ozone, ya bụ, na elu ụwa, ọ na-emetọ ma na-emerụ ahụ ike.
Otú ọ dị, ozone dị na stratosphere nwere ebumnuche nke ichebe onwe anyị megide ụzarị ultraviolet nke Sun. Rayszarị ndị a na-emebi anụ ahụ, ahịhịa na anụmanụ nke ụwa. Ọ bụrụ na oyi akwa ozone adịghị, anyị agaghị enwe ike ịpụ n'èzí na-ereghị onwe anyị ọkụ na ọrịa kansa ga-agbasakwa n'ụwa niile.
Ngwurugwu ozone na-eme ka ọtụtụ radieshon nke anyanwụ sitere na mbara igwe weghachite ma ọ erughị n’elu. N'ụzọ dị otú a, a na-echebe anyị pụọ na ụzarị ndị ahụ na-emerụ ahụ.
Ọ bụrụ na oyi akwa ozone adịghị ike ruo n'ókè nke na ọ na-ahapụ site na ụzarị ọkụ UVA na-emerụ ahụ, ọ nwere ike ịmetụta ụmụ irighiri ihe dị mkpa maka ndụ dị ka mkpụrụ ndụ DNA.
N’ime ụmụ mmadụ, ikpughebiga onwe ya oke na radieshon dị otú ahụ na-akpata nnukwu nsogbu ahụ ike, dịkwa ka ọ dị ọdịdị nke kansa. Na ahịhịa na-a mbelata nke photosynthesis, mmụba na mmepụta. Na-enweghị photosynthesis, osisi enweghị ike ịdị ndụ ma ọ bụ mepụta oxygen, na-adọrọ CO2 na usoro ahụ.
N'ikpeazụ, a na-emetụtakwa usoro okike ndị dị na mmiri ruo mita 5 mbụ nke omimi (nke bụ mpaghara ebe enwere ọnọdụ kachasị elu nke radieshon nke anyanwụ). N'akụkụ ndị a nke oké osimiri, na photosynthetic ọnụego nke phytoplankton mbelata, ihe dị oké mkpa ebe ọ bụ na ọ bụ ntọala nke ihe oriri.
Otu esi elekọta ya
Iji kpuchido oyi akwa ozone, gọọmentị gburugburu ụwa ga-ehiwe usoro iji belata anwuru nke gas ndị a na-emerụ ahụ. Ma ọ bụghị ya, ọtụtụ osisi nwere ike ịnwụ site na radieshon nke anyanwụ, kansa cancer ga-abawanye, ụfọdụ nsogbu gburugburu ebe obibi ka njọ.
Na ọkwa nke onye ọ bụla, dị ka ụmụ amaala, ihe ị nwere ike ime bụ ịzụta ngwaahịa aerosol nke na-enweghị ma ọ bụ mee ya na ihe ndị na-ebibi ozone. Otu n'ime ikuku kacha ebibi ihe nke igwe a bu:
Ndị CFC (chlorofluorocarbons). Ha kachasị ebibi ma wepụta ya n'ụdị aerosol. Ha nwere ogologo ndụ ogologo oge na ikuku ma, yabụ, ndị ahụ ewepụtara n'etiti narị afọ nke XNUMX ka na-emebi.
Mmiri halogenated. A na-ahụ ngwaahịa a na ọkụ ọkụ. Ihe kachasị mma bụ ijide n'aka na ihe mkpofu anyị na-azụta enweghị gas a.
Methyl bromide. Ọ bụ ọgwụ na-egbu ihe na-egbu osisi. Mgbe a tọhapụrụ ya na gburugburu ebe obibi ọ na-ebibi ozone. Ezigbo ihe abụghị ịzụta arịa eji osisi ndị a rụọ.
Azụkwana spra nwere CFC.
Ejila ihe na-ehichapụ halon.
Zụrụ ihe na-egbochi ihe nke na-enweghị CFC ma dika agglomerated cork.
Ọ bụrụ na a ezigbo ntụzi ikuku, anyị ga-egbochi mkpụrụ akụkụ CFC iru oyi akwa ozone.
Ọ bụrụ na ngwa nju oyi ahụ ajụghị oyi dịka o kwesiri, nwere ike ihihi CFC. Otu ihe a na-emekwa maka ikuku ikuku ụgbọala ahụ.
Jiri ụgbọ ala dị ka obere ka o kwere mee ma jiri ụgbọ njem ọha ma ọ bụ igwe.
Zụrụ bọlb ọkụ na-echekwa ike.
Chọọ ụzọ kacha nso gaa ụgbọ ala ma ọ bụrụ na ọ nweghị nhọrọ ọzọ karịa ịnara ya. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-elekwa anya n'akpa.
Jiri ntụ oyi na kpo oku dịka o kwere mee.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mbibi nke oyi akwa ozone na otu o si dị mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ozone oyi akwa mbibi
Gịnị bụ ụyọkọ kpakpando